ကနျြးမာကောငျးမှနျတဲ့ သညျးခွအေိတျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ အဓိက စားသုံးသငျ့သော အစားအစာမြား။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/ကနျြးမာကောငျးမှနျတဲ့ သညျးခွအေိတျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ အဓိက စားသုံးသငျ့သော အစားအစာမြား။
ကနျြးမာကောငျးမှနျတဲ့ သညျးခွအေိတျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ အဓိက စားသုံးသငျ့သော အစားအစာမြား။
သဈတျောသီးပုံစံ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါဖွဈတဲ့ သညျးခွအေိတျရဲ့ အဓိကလုပျငနျးကတော့ အဆီတှကေို ခဖြေကျြပေးဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့သညျးခွအေိတျဟာ ပုံမှနျအလုပျမလုပျဘူးဆိုရငျ ကိုယျတှငျး အကျဆဈတှပွေနျစီးခွငျး၊ လကေနျခွငျး၊ အော့အနျခွငျးနဲ့ ဗိုကျအောငျ့ခွငျးတို့ကို ဖွဈစပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့ သညျးခွအေိတျကို ကောငျးမှနျစှာအလုပျလုပျနိုငျဖို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ အစားအစားအခြို့ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ထောပတျသီးတှငျ ပိုတကျစီယမျဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ သညျးခွအေိတျကနျြးမာဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးအသီးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ “ ထောပတျသီးမှာ ပိုတကျစီယမျဓာတျ အမြားဆုံးပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျဖို့အတှကျ ပုံမှနျစားသုံးသငျ့ပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး ဒေါကျတာ ကယျရီဘားရိုးက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ “ ပိုတကျစီယမျဟာ ရဓောတျဆုံးရှုံးမှုမရှိအောငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျးစီးဆငျးနတေဲ့ အရညျဓာတျတှရေဲ့ အဓိက လိုအပျတဲ့အာဟာရဓာတျပဲဖွဈပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး သူမက ထပျမံဖွညျ့စှကျ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
၂။ ပဲပငျ၊ ပဲစေ့။
ပဲပငျ ပဲစလေ့ေးတှကေနလေညျး ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှေ အမွောကျအမွား ရရှိနိုငျပွီး သညျးခွအေိတျကနျြးမာရေးအတှကျ စားသုံးသငျ့တဲ့ အစားအစာတဈမြိုးလညျးဖွဈပါတယျ။ “ သငျ့ရဲ့ အစားအစာတှထေဲမှာ ကိုလကျစထရောတှေ၊ အဆီဓာတျတှေ အမွောကျအမွား ပါဝငျနမေယျဆိုရငျ သညျးခွရေညျတှကေို ခဲစပွေီး သညျးခွကြေောကျဖွဈစပေါတယျ . . . ” ဆိုပွီး အစာအိမျရောဂါအထူးကုဆရာဝနျ ရှီလာရကျဒီမှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အသားစားတာကို လြှော့ခပြွီး အသီးအရှကျမြားမြားစားမယျဆိုရငျ ကိုလကျစထရောပမာဏကိုထိနျးသိမျးပေးပွီး သညျးခွကြေောကျဖွဈနိုငျခကြေိုလညျး လြော့ကစြပေါတယျ။ “ အပငျကရရှိပွီး ပရိုတငျးဓာတျပါဝငျတဲ့ ပဲစတှေ့ေ၊ ပဲနီလေးနဲ့ တို့ဟူးတှဟော သညျးခွအေိတျကနျြးမာရေးအတှကျ အကောငျးဆုံးအစားအစားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး သူမက ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
လိမ်မျောသီးဟာဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာဖို့အတှကျ အထောကျအကူပွုတဲ့ အသီးတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ “ ဗီတာမငျ – စီ ဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ ရှောကျခြိုသီးတှေ၊ လိမ်မျောသီးတှေ၊ ဘယျရီသီးတှဟောလညျး ကနျြးမာတဲ့ သညျးခွအေိတျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးရှေးခယျြမှုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ဗီတာမငျ – စီဟာ သညျးခွကြေောကျတညျခွငျးတှကေို ခဖြေကျြပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး ဂြာမနီသုတသေနပညာရှငျ ဘူစီဝီးဇျမှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၄။ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ
အစိမျးရောငျရှိ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှဟော ကိုယျတှငျးရှိ အဆီဓာတျတှကေို ခဖြေကျြပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ “ ပဲတောငျ့ရှညျ၊ ပနျးဂျေါဖီအစိမျး စသဖွငျ့ အစိမျးရောငျရှိ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှဟော သညျးခွရေညျ ထုတျပေးနိုငျဖို့အတှကျ အကူအညီပေးပါတယျ။ တကယျလို့ သညျးခွအေိတျဟာ သညျးခွရေညျတှကေို လုံလုံလောကျလောကျ ထုတျပေးနိုငျစှမျးမရှိဘူးဆိုရငျတော့ ရောဂါလက်ခဏာတှေ စတငျ ဖွဈပျေါလာပါလိမျ့မယျ . . . ” ဆိုပွီး ဒေါကျတာ တာရာက ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ကနျြးမာကောငျးမှနျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ရဓောတျဆုံးရှုံးမှုမဖွဈအောငျ နထေိုငျဖို့က အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရမြေားမြားသောကျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ “ သညျးခွရေညျအပါအဝငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျးရှိ အရညျစီးဆငျးမှုအတှကျ ရဓောတျဟာ အဓိက အရေးပါတာကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ရဓောတျဆုံးရှုံးမှုမဖွဈအောငျ နထေိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ . . .” ဆိုပွီး ဒေါကျတာ နာရကျမှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့ သည်းခြေအိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိက စားသုံးသင့်သော အစားအစာများ။
သစ်တော်သီးပုံစံ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်တဲ့ သည်းခြေအိတ်ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ အဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့သည်းခြေအိတ်ဟာ ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်တွင်း အက်ဆစ်တွေပြန်စီးခြင်း၊ လေကန်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ သည်းခြေအိတ်ကို ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အစားအစားအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ထောပတ်သီးတွင် ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် သည်းခြေအိတ်ကျန်းမာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ “ ထောပတ်သီးမှာ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ် အများဆုံးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ပုံမှန်စားသုံးသင့်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး ဒေါက်တာ ကယ်ရီဘားရိုးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ပိုတက်စီယမ်ဟာ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းစီးဆင်းနေတဲ့ အရည်ဓာတ်တွေရဲ့ အဓိက လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး သူမက ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂။ ပဲပင်၊ ပဲစေ့။
ပဲပင် ပဲစေ့လေးတွေကနေလည်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ အမြောက်အမြား ရရှိနိုင်ပြီး သည်းခြေအိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ “ သင့်ရဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ကိုလက်စထရောတွေ၊ အဆီဓာတ်တွေ အမြောက်အမြား ပါဝင်နေမယ်ဆိုရင် သည်းခြေရည်တွေကို ခဲစေပြီး သည်းခြေကျောက်ဖြစ်စေပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး အစာအိမ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန် ရှီလာရက်ဒီမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အသားစားတာကို လျှော့ချပြီး အသီးအရွက်များများစားမယ်ဆိုရင် ကိုလက်စထရောပမာဏကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး သည်းခြေကျောက်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ “ အပင်ကရရှိပြီး ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ပဲစေ့တွေ၊ ပဲနီလေးနဲ့ တို့ဟူးတွေဟာ သည်းခြေအိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး သူမက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လိမ္မော်သီးဟာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ ဗီတာမင် – စီ ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ရှောက်ချိုသီးတွေ၊ လိမ္မော်သီးတွေ၊ ဘယ်ရီသီးတွေဟာလည်း ကျန်းမာတဲ့ သည်းခြေအိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဗီတာမင် – စီဟာ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး ဂျာမနီသုတေသနပညာရှင် ဘူစီဝီးဇ်မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၄။ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်
အစိမ်းရောင်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ ကိုယ်တွင်းရှိ အဆီဓာတ်တွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ “ ပဲတောင့်ရှည်၊ ပန်းဂေါ်ဖီအစိမ်း စသဖြင့် အစိမ်းရောင်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ သည်းခြေရည် ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အကူအညီပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ သည်းခြေအိတ်ဟာ သည်းခြေရည်တွေကို လုံလုံလောက်လောက် ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . . . ” ဆိုပြီး ဒေါက်တာ တာရာက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင် နေထိုင်ဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေများများသောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ “ သည်းခြေရည်အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အရည်စီးဆင်းမှုအတွက် ရေဓာတ်ဟာ အဓိက အရေးပါတာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင် နေထိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် . . .” ဆိုပြီး ဒေါက်တာ နာရက်မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous ကိုကျလနျကဲ့သို့ပငျ ကနျြးမာရေးကို အလှနျအထောကျအကူပွုတဲ့ ဂျေါဖီထုပျ။
Next ကမ်ဘာ့ပထမဆုံးရပေျေါ Apple Store